Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle1 w/ipuli nejimu e-Kileleshwa (Flatshare) - I-Airbnb
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle1 w/ipuli nejimu e-Kileleshwa (Flatshare)
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguTapu
Eli ligumbi labucala elikwigumbi elinamagumbi okulala ayi-3 + (SQ) flatshare. Inegumbi lokuhlambela elipheleleyo kodwa ineendawo ezisetyenziswa nangabanye abantu (igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, ikhitshi kunye ne-balcony) kunye nabanye abantu abahlala kuyo, abavela ekuhlaleni nabasemazweni ngamazwe. Ukhululekile ukuba abantu bazive besekhaya kodwa siyazihlonipha izinto eziyimfihlo zomntu wonke. Kukho indawo yokujima nepuli yokuqubha, enokufikeleleka ngokukhululekileyo kuzo zonke iindwendwe. Eli xabiso liquka indawo yokuhlala, ilinen yebhedi, umbane, i-Wi-Fi, igesi yokupheka, amanzi, indawo yokuhlamba impahla nokucoca indlu (kathathu ngeveki).
Kuyenzeka ukuba uhlale wedwa kwaye unganxibelelani nabani na konke konke. Nangona kunjalo, ukhululekile ukuba uhlale nathi nanini na xa oko kusenzeka, ukuze uhlukane nokuba wedwa.
IKileleshwa isembindini kwaye yenye yezona ndawo zikhuselekileyo eNairobi. Kukho iinketho ezininzi zokuthenga (igrosari - imizuzu emi-3 ngeenyawo; Iziko leKasuku, iLavington Mall, iLavington Curve, iYaya Centre, iWestfield Valley Arcade kunye neJunction Mall yonke ngaphakathi kwe-5-10 imizuzu yokuqhuba); ukutya ngaphandle (iKenya, iSomalia, iNigeria, iGhana, iIndiya, isiTshayina, isiJapan, isiThai, isiTaliyane, isiFrentshi, njl njl) kunye nokuphuma ebusuku, kungekuphela nje eKileleshwa kodwa eKilimani, eLavington/Valley Arcade, eWestlands naseCBD. Nangona kunjalo, ingqiqo kufuneka ihlale ikhona, njengakwezinye iindawo emhlabeni;)
UberEats, Glovo, Jumia Food kunye nezinye iinkonzo zinokuzisa ukutya kunye negrosari kwigumbi lokuhlala.
Umbuki zindwendwe ngu- Tapu
Ndihlala kwindlu enye, kodwa ukuphindaphinda kokunxibelelana nam kuxhomekeke ekundwendweleni kwakho kunye nokuba kuqhubeka ntoni ngelo xesha. NdingumKenya kwaye ndiyazi kakuhle iNairobi ngoko ke inokuba sisixhobo esiluncedo sokuya kwindawo ethile, ukufumana ntoni, amaxabiso njl.njl.
Ndihlala kwindlu enye, kodwa ukuphindaphinda kokunxibelelana nam kuxhomekeke ekundwendweleni kwakho kunye nokuba kuqhubeka ntoni ngelo xesha. NdingumKenya kwaye ndiyazi kakuhle iNa…